Antonio Guterres oo markale loo dhaariyay xilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Antonio Guterres oo markale loo dhaariyay xilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay
Antonio Guterres oo markale loo dhaariyay xilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres waxaa loo dhaariyay xilli labaad oo shan sano maanta iyadoo ay goobjoog ka ahaayen 193-ka xubnood ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Khudbad uu jeediyay Guterres ayuu ballanqaaday markale inuu si hagar la’aan ah ugu shaqeyn doono xilka loo dhiibay.
“Waxaan ku bixin doonaa wax walba oo aan ku xaqiijinayo inuu soo ifbaxayo kalsoonida u dhaxeysa iyo umadaha waaweyn iyo yar yar, si loo dhiso buundooyin, iyo inaan si hagar la’aan ah uga qeybqaato dhismaha kalsoonida,” ayuu Guterres u sheegay Golaha Guud kadib markii loo dhaariyay xafiiska.
15-ka xubnood ee Golaha Ammaanku ayaa horaantii bishaan ku taliyeen in dib loogu magacaabo Guterres. Muddo-xileedkiisa labaad oo bilaabmayaa Jan. 1, 2022.
Guterres wuxuu xilka kala wareegay Ban Ki-moon bishii Janaayo 2017, toddobaadyo uun ka hor markii Donald Trump uu noqday madaxweynaha Mareykanka. Inta badan Guterres xilligiisii ​​ugu horreeyay wuxuu diiradda saaray sidii uu u dejin lahaa Trump, kaasoo su’aal ka keenay qiimaha Qaramada Midoobay iyo dhinacyada badan.
Mareykanka waa kan ugu weyn ee qaramada midoobay ku tabaruca maaliyaddiisa, wuxuu mas’uul ka yahay 22% miisaaniyadda caadiga ah iyo ku dhowaad rubuc miisaaniyadda nabad ilaalinta. Madaxweyne Joe Biden, oo xafiiska la wareegay bishii Janaayo, ayaa bilaabay dib u soo celinta lacagaha dhimista ee uu Trump u sameeyay hay’adaha UN-ka.
Danjiraha Mareykanka Linda Thomas-Greenfield waxay sheegtay in Qaramada Midoobay ay la kulantay caqabado taariikhi ah, laakiin waxay rajeyneysaa in iyadoo Guterres uu hogaanka hayo shanta sano ee soo socota ay arki doonaan nabad ka sii badan, amni badan, iyo barwaaqo ka badan tii hore.
Guterres, oo 72 jir ah, wuxuu ahaa ra’iisul wasaaraha Boortaqiiska intii u dhaxeysay 1995 ilaa 2002 wuxuuna madax ka ahaa hay’ada Qaxootiga ee UN-ka intii u dhaxeysay 2005 ilaa 2015.
Markii uu xilka qabtay oo uu noqday madaxa UN-ka, hay’adda adduunka waxay la halgameysay joojinta dagaallada iyo la tacaalida dhibaatooyinka bani’aadamnimada ee Suuriya iyo Yemen Colaadahaas wali lama xalin, Guterres sidoo kale wuxuu hada wajahayaa xaalado deg deg ah Myanmar iyo gobolka Tigray ee Ethiopia.
Antonio Guterres oo markale loo dhaariyay xilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay was last modified: June 19th, 2021 by Admin
Kaaliyaha Wasiirka Arrimaha Dibbada Qatar oo la kulantay James Swan
Dhageyso:Warka Caawa ee Idaacada Warsan
Akhriso Guddomiye Cabdi Xaashi Oo Kasoo Horjeeystay Go’aankii Ay Ku Dhawaaqday Xukuumadda In Doorasho la aado
Dhageyso:- Wargays Billa ah oo ku qoran Afka Maayga oo Magaalada Baydhabo ka soo bixidoono
Isku dhac ciidan oo Ruushka iyo Mareykanka ku dhex-maray Syria iyo xiida oo ka sii dareysa
Sii hayaha Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshadda oo kulan la qaatay Agaasimayaasha guud ee Wasaaradaha Shaqada dowlad goboleedyada “Sawirro”